ကူးသနျးသှားလာခှငျ့ ပွနျလညျဖှငျ့ပေးလိုကျပွီဖွဈတဲ့ ဝူဟနျမွို့။ – SoShwe
Home/Other/ကူးသနျးသှားလာခှငျ့ ပွနျလညျဖှငျ့ပေးလိုကျပွီဖွဈတဲ့ ဝူဟနျမွို့။
ကူးသနျးသှားလာခှငျ့ ပွနျလညျဖှငျ့ပေးလိုကျပွီဖွဈတဲ့ ဝူဟနျမွို့။
So Shwe April 9, 2020	Other Leaveacomment
တရုတျနိုငျငံဝူဟနျမွို့ကနေ စတငျပြံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာရောဂါပိုးကို ကူးစကျခံရသူအမြားအပွားရှိလာပွီး သဆေုံးသူတှလေဲ ရှိခဲ့တာကွောငျ့ ဝူဟနျမွို့ကိုဝငျခှငျ့ထှကျခှငျ့ ပိတျသိမျးလိုကျတာကွောငျ့ ဝူဟနျမှာနထေိုငျနတေဲ့ နိုငျငံခွားသားတှဟောလညျး မှေးရပျမွကေို ပွနျခှငျ့မရှိခဲ့ပါဘူး။
ရောဂါပိုးကိုတိုကျထုတျနိုငျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ဝူဟနျမွို့အစိုးရအဖှဲ့က ဝူဟနျမွို့အတှငျးမှာနထေိုငျနတေဲ့ မွို့သူမွို့သားတှကေို ဝငျခှငျ့ထှကျခှငျ့ပေးလိုကျပွီး ကွိုကျတဲ့နရောကို ကွိုကျတဲ့ယာဉျစီးပွီး ခရီးသှားခှငျ့တှေ ပေးထားလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ဝူဟနျမွို့ရဲ့ လယောဉျကှငျးမှာ စုပွုံပွီးရောကျရှိနတေဲ့ သူတှကေ ဝူဟနျမွို့သားတှလေား (သို့) အခွားမွို့/နိုငျငံက သူတှလေား? ဆိုတာကတော့ မေးခှနျးကောငျးပါပဲ။
ဝူဟနျမွို့အစိုးရအဖှဲ့ကလညျး ဝူဟနျမွို့ကနထှေကျသှားသူ ထောငျခြီရှိတာကွောငျ့ လယောဉျခရီးကိုရှေးခယျြပွီး ထှကျသှားသူတှရေဲ့ ရောကျလိုရာအရပျကို ဧပွီလ၈ရကျနကေ့နစေပွီး ၁၅ရကျနထေိ့ မနားတမျးပြံသနျးပို့ဆောငျပေးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဝူဟနျမွို့ပငျမသတငျးဌာနရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ မညျသညျ့သယျယူပို့ဆောငျရေးယာဉျကိုမဆို စီးနငျးလိုကျပါသူတှအေနနေဲ့ ယာဉျပျေါတတျတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ ယာဉျပျေါကနဆေငျးတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ ပိုးသတျဆေးဖွနျးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
CNN သတငျးဌာနရဲ့ ဆောငျးပါးတဈပုဒျမှာတော့ ဝူဟနျမွို့ကနထှေကျလာတဲ့သူအမြားစုဟာ ဝူဟနျမွို့ကို သှားရောကျလညျပတျစဉျ ရောဂါကူးစကျပြံ့နှံ့မှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ဝူဟနျမွို့အဝငျအထှကျကို ပိတျသိမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဝူဟနျမွို့ထဲမှာ ပိတျနမေိတဲ့ နိုငျငံရပျခွား (သို့) ဒသေခွားမှ ဝူဟနျသို့ လာရောကျလညျပတျသူတှေ ဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။
ကူးသန်းသွားလာခွင့် ပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်မြို့။
တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကနေ စတင်ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါပိုးကို ကူးစက်ခံရသူအများအပြားရှိလာပြီး သေဆုံးသူတွေလဲ ရှိခဲ့တာကြောင့် ဝူဟန်မြို့ကိုဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့် ပိတ်သိမ်းလိုက်တာကြောင့် ဝူဟန်မှာနေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာလည်း မွေးရပ်မြေကို ပြန်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး။
ရောဂါပိုးကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဝူဟန်မြို့အစိုးရအဖွဲ့က ဝူဟန်မြို့အတွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေကို ဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီး ကြိုက်တဲ့နေရာကို ကြိုက်တဲ့ယာဉ်စီးပြီး ခရီးသွားခွင့်တွေ ပေးထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဝူဟန်မြို့ရဲ့ လေယာဉ်ကွင်းမှာ စုပြုံပြီးရောက်ရှိနေတဲ့ သူတွေက ဝူဟန်မြို့သားတွေလား (သို့) အခြားမြို့/နိုင်ငံက သူတွေလား? ဆိုတာကတော့ မေးခွန်းကောင်းပါပဲ။
ဝူဟန်မြို့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း ဝူဟန်မြို့ကနေထွက်သွားသူ ထောင်ချီရှိတာကြောင့် လေယာဉ်ခရီးကိုရွေးချယ်ပြီး ထွက်သွားသူတွေရဲ့ ရောက်လိုရာအရပ်ကို ဧပြီလ၈ရက်နေ့ကနေစပြီး ၁၅ရက်နေ့ထိ မနားတမ်းပျံသန်းပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝူဟန်မြို့ပင်မသတင်းဌာနရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ကိုမဆို စီးနင်းလိုက်ပါသူတွေအနေနဲ့ ယာဉ်ပေါ်တတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ယာဉ်ပေါ်ကနေဆင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
CNN သတင်းဌာနရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာတော့ ဝူဟန်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့သူအများစုဟာ ဝူဟန်မြို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဝူဟန်မြို့အဝင်အထွက်ကို ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဝူဟန်မြို့ထဲမှာ ပိတ်နေမိတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား (သို့) ဒေသခြားမှ ဝူဟန်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Source ~ Elite
Previous COVID-19 အတှကျ ဒျေါလာ ၁ ဘီလြံလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီပိုငျရှငျကွီးတဈဦး။
Next COVID-19 ????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????